DEG DEG+DHAGAYSO:Dalka Ethiopia oo Soomaalidii ugu badnayd lagu xasuuqay & Dhimashada oo lagu sheegay 451 Qof + Dhaawaca oo maraya…. | PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL DEG DEG+DHAGAYSO:Dalka Ethiopia oo Soomaalidii ugu badnayd lagu xasuuqay & Dhimashada oo lagu sheegay 451 Qof + Dhaawaca oo maraya…. – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
Home W.Gudaha DEG DEG+DHAGAYSO:Dalka Ethiopia oo Soomaalidii ugu badnayd lagu xasuuqay & Dhimashada oo lagu sheegay 451 Qof + Dhaawaca oo maraya….
DEG DEG+DHAGAYSO:Dalka Ethiopia oo Soomaalidii ugu badnayd lagu xasuuqay & Dhimashada oo lagu sheegay 451 Qof + Dhaawaca oo maraya….
JIGJIGA(P-TIMES)-Ugu yaraan 451 qof oo Soomaali ah ayaa lagu dilay dagaalada u dhaxeeya Qoomiyadaha Oromada iyo Soomaalida, iyadoona sidoo kale shegay in lagu dhaawacay dagaaladaasi 251 qof oo si naxariis daro ah loo jidh dilay sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay’adda xuquuqul insaanka dalka Ethiopia. RIIX HALKAN OO KA DHAGAYSO
Sidoo hay’addu waxa ay ku sheegtay warbixinteeda in weeraradan ay ka qayb galeen ciidamada Booliska Oromia oo laga hayo kiisas ka badan sagaal gabdhood oo ay kufaadeen Oromadu, waxaa kaloo lagu xusay warbixinta hay’adda in illaa 30 ruux oo Soomaali lagu la’ yahay rabshadaha ka socda xuduuda labada Qoomiyadood kuwaas oo aan noolal iyo geeri midna lagu hayn.
Dhinaca kale warbixinta ayaa lagu sheegay in ciidamada Liyou Policeka ay iyaguna weeraro ka gaysteen magaalooyinka ku dhow xuduudaha kuna dileen 196 qof oo Oromo ah isla markaasna dhaawaceen 88 ruux oo ay ku jiraan saraakiil Police oo ka tirsan gobolka Oromia.